M/weyne Shariif iyo wafti uu horkacyo oo u ambabaxay dalka Brundi. – Radio Daljir
Muqdisho, Aug 15 – M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho kuwaasi oo kusii jeeda dalka Brundi oo ah waddanka labaad ee ciidamadiisu ay joogaan Muqdisho.
M/weynaha Shariif Sh. Axmed ayaa socdaalkiisa waxaa ku weheliya xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka oo uu ka mid yahay r/wasaare ku-xigeenka ahan wasiirka arrimaha dibadda, waxaana sidoo kale waftigiisa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Inkastoo aan si rasmi ah loo faahfaahin ujeeddada socdaalka waftiga m/weynuhu ku qotomo haddana waxaa la tilmaamayaa in uu kulamo la yeelan doono dhiggiisa waddanka Brundi, ayna ka wadahadli doonaan arrimo badan oo ammaanku uu ugu horreeyo.
Labada m/weyne ayaa sida warar xog-ogaal ahi Radio Daljir u xaqiiyeen isla soo qaadi doono sidii sidii gacan buuxda loogu dhigi lahaa dhammaan degmooyinka kala duwan ee ee gobolka Banaadir.
Ma cadda safarka madaxweynuhu in uu ku ekaan doono oo kaliya dalka Brundi iyo in uu u sii tallaabi doono waddamo kale, waxaana m/weynuhu todobaaddo ka hor uu ka yimid safar uu ku maray dalal badan oo Geeska Afrika ah sida Jabbuuti, Ethiopia, Suudaan iyo dalal kale.